नेवाः जातिको समस्या र समाधान – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
- — पवनमान श्रेष्ठ
नेवाः जाति नेपालकै एक विकसित जाति हो । नेवाको सन्दर्भमा जातिको अर्थ राष्ट्र वा ‘नेशन’ हो । नेवाःको आफ्नो छुट्टै मौलिक भाषा, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक जीवन पद्दतिसहित नेवाः संस्कृतिका कारण विकसित सामुहिक मनोविज्ञान छ । नेवाः जाति (राष्ट्र) उत्पीडित र शासित जाति (राष्ट्र) हो । त्यसैले, यसलाई जनजातिमा समावेश गरिएको छ ।
नेवाःको आदिथलो मूलरुपमा काठमाण्डौं उपत्यका हो । नेवाः जाति यहाँको आदिवासी हो । हाम्रो देशमा आदिवासी विकास भई राष्ट्र बनेको एकमात्र जाति नेवाः जाति हो । आफ्नो मौलिक विशेषतासहितको विकसित भाषा, कला, संस्कृति, अर्थतन्त्र र सभ्यता अन्र्तनिहित नेवाः जाति वा राष्ट्र नेवाःहरुका लागि मात्र होइन, बरु नेपालकै लागि गौरवको विषय हो । तर नेपालको खस ब्राह्मणवादी सामन्ती राज्य, नोकरशाही र दलाल पुँजीवादी सामन्तवादी राज्यका शासकहरुले नेवाः जाति, यसको विकसित र लोकप्रिय भाषा, कला, संस्कृति, अर्थतन्त्र, आदिथलो र सभ्यतालाई एउटा ठूलै चुनौतीका रुपमा लिने गरेका छन् ।
त्यसैले नेवाः जातिलाई कमजोर पार्नु अथवा विलोप पार्नु शासकहरुको नीति रहँदै आएको छ । शाहीतन्त्र, राणातन्त्र, संसदवादी नेताहरु र कम्युनिष्ट विचार र राजनीतिबाट च्युत भइसकेका स्वनामधारी कम्युनिष्ट नेता र पार्टीहरुको नीति नेवाःसहित आदिवासी जनजातिहरुलाई उत्पीडनमा पारी दबाएर राख्ने रहेको छ । किनकि उनीहरुको राजनैतिक चरित्र दलाल र प्रतिक्रियावादी छ । यो कुरा उनीहरुको व्यवहारले प्रष्ट रुपमा देखाइ सकेको र देखाइ रहेको छ ।
उनीहरुले मुखले जतिसुकै आदिवासी जनजातिको लागि स्वतन्त्रता, समानता र विशेषाधिकारका बारेमा कुरा गरे तापनि आजको यथार्थता यही हो । त्यसैले शासकहरुले नेवाः जातिका विरुद्ध नानाथरी लान्छाना लगाउने र बदनाम गर्ने कोशिश हुँदै आएको छ । उनीहरुको नेवाः जातिका विरुद्ध दुश्मनीपूर्ण नीति र लान्छानाका कारणले शासक जातिका मानिसहरुमा मात्र होइन, अरु जातिका मानिसहरुका मानसिकतामा पनि यसले नकरात्मक असर पारेको प्रष्ट देखिन्छ ।
नेवाः जातिलाई लोप पार्न सामन्ती खस ब्राह्मणवादी शासक पृथ्वीनारायण शाहको समयदेखि यस जातिको भापा, कला, संस्कृति लोप पार्ने काम तथा नेवाःहरुलाई उनीहरुको आदिभूमिबाट विस्थापित गर्ने काम हुँदै आएको र आज यो झन् तीब्र भएको छ । पछि पारिएका आदिवासी जनजातिहरुलाई विशेष अधिकार दिई तिनलाई उठाएर विकसित जाति वा राष्ट्र बनाउने राज्यको नीति हुनु पर्ने हो ।
तर नेपालको एक मात्र राष्ट्रको रुपमा विकास भइसकेको आदिवासी नेवाः जातिलाई पनि लोप पार्ने ब्रम्हाणवादी शासकहरुका नीतिको कारण नेवाः जाति वा राष्ट्र देशमा आज सबैभन्दा उत्पीडित र गम्भीर संकटमा परेको छ । नेवाः जातिमाथि हुँदै आएका उत्पीडन र षड्यन्त्रका कारणले नेवाः जातिको र नेवाः जातिभित्र रहेका समस्याहरु यसरी सूत्रीकरण गर्न सकिन्छ ः
पृथ्वीनारायण शाहले नेवाःभूमि कब्जा गरेपछि नेवाःहरुलाई योजनाबद्ध ढंगले शासन र प्रशासनबाट बाहिर राख्ने काम भयो । यसले शदियौंपछि आज आएर नेवाः जातिको चारित्रिक विशेषताको रुपमा गैरराजनीतिक हुन गएको छ । यसले शासकहरुका लागि नेवाः जातिमाथि उत्पीडन गर्न झन् सहज बन्न पुगेको छ ।
२) नेवाः जाति आफ्नो आदिभूमिमा अल्पमतमा पर्न गएका कारणले पैदा भएको समस्या
नेवाः भूमिमा नेवाःहरु अल्पमतमा परेको अवस्था छ । अझ आदिभूमि काठमाण्डौ उपत्यकामा साह्रै अल्पमतमा परिसकेको अवस्था छ । सन् २०११ को जनगणनाअनुसार काठमाण्डौ उपत्यकाको जनसंख्या झण्डै २५ लाख रहेको छ । यसमा नेवाःहरुको संख्या सालाखाला ६÷७ लाख रहेको छ । यसको मतलब नेवाःहरु उपत्यकामा सालाखाला २५% मात्र रहेको छ । देशभरिको जनसंख्यामा नेवाःहरुको संख्या ५% रहेको देखाइएको छ । जबकि देशको जनसंख्या वार्षिक वृद्धिदर १.३५% रहेको, तर उपत्यका अझ काठमाण्डौ जिल्लाको जनसंख्या वृद्धि ६१.३% रहेको देखाइएको छ ।
जुन कुरा औसत वृद्धिदरभन्दा ५ गुणा छ । सन् २००१ को जनगणनाअनुसार उपत्यकाको जनसंख्या झण्डै १५ लाख रहेको छ । १.३५% वृद्धिदरलाई हेर्दा २०११ मा दुई लाख बढेर उपत्यकाको जनसंख्या १७ लाख मात्र हुनुपर्ने हो । सन् २००१ को जनगणना अनुसार काठमाण्डौको जनसंख्या वृद्धि झण्डै ५३% थियो । जबकि त्यस वेला औसत वार्षिक वृद्धिदर २.५% थियो । यसको अर्थ काठमाण्डौको जनसंख्या वृद्धि औसत वृद्धिदरभन्दा दुई गुणा रहेको देखिन्छ । सन् २०११ मा ५ गुणा रहेको वृद्धि आज निश्चित रुपमा झन बढेर गएको छ । सन् २०२१ सम्मको जनसंख्याको औषत वृद्धिदर घट्दै जाने देखिन्छ भने, काठमाण्डौ र उपत्यकामा जनसंख्या वृद्धिदर बढेर जाने कुराको प्रक्षेपण स्वतः गर्न सकिन्छ ।
यसरी हेर्दा सन् २०२१ सम्म उपत्यकाको जनसंख्याको वृद्धि ७५% हुने कुराको अनुमान गर्दा आज सन् २०१८ सम्मको यहाँको जनसंख्या लगभग ३५ लाख हुन्छ । तर यसमा उपत्यका बाहिरबाट आई उपत्यकामा घर बनाएर बसोबास गरिरहेका तर बसाइसराइ लिइनसकेकाहरुको संख्या समावेश नै छैन । उपत्यकामा डेरामा बसेका र अस्थायीरुपमा काठमाण्डौ आउजाउ गर्नेहरुको संख्या लिने हो भने उपत्यकाको जनसंख्या लगभग ६० लाख हुने कुरा सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । काठमाण्डौ उपत्यका जस्तो उर्बर भूमि तथा कला, संस्कृतिले भरिपूर्ण सानो भूगोलमा ६० लाखको बोझ बोकाइ उपत्यकालाई कुरुप बनाउने शासकहरुलाई के उपमा दिने होला ?
नेवाःहरु आदिभूमिमा र नेवाःभूमिमा अल्पमतमा परेको, जुन नेवाः जातिका लागि अत्यन्त घातक छ, यसका मुख्य कारण यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ:
— काठमाण्डौ राजधानी बनाइनु
— गैर नेवाःहरुको अनियन्त्रित आप्रवासन
— नेवाःहरुको आदिभूमिबाट विस्थापन
खस ब्राह्माणवादी राज्यको नियोजित षड्यन्त्र र दमनका कारण खस भाषाको अतिक्रमणले आज विकसित र समृद्ध नेपाल भाषा लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ । यसको कारक ब्राह्मणवादी राज्यसत्ता त भएकै छ तर नेवाःहरुको पनि आफ्नो मातृभाषा प्रतिको अनुराग र प्रेम कतै मर्दै गएको त छैन ? यो पनि गंभीर प्रश्न बनेको छ । हामीले यसमा मुस्लीम समुदाय र बंगलादेशबाट शिक्षा लिन सक्नु पर्दछ ।
४) साँस्कृतिक समस्या
नेवाः समाजको विघटनको प्रक्रिया नेवाःहरुका भूमिबाट विस्थापनसंगसंगै सुरु भएको छ । यसले गर्दा नेवाः संस्कृति पनि क्रमशः लोप हुने स्थितिमा पुगेको छ ।
५) गैर न्यायिक विकास निर्माणका कारण उत्पन्न समस्या
काठमाण्डौ उपत्यका आज संसारकै सबैभन्दा अव्यवस्थित शहरमध्ये एक रहेको छ । अनियन्त्रित लाखौंलाख गैरनेवाःहरुको उपत्यकामा आप्रवासनका कारणले पानी, ढल, फोहर, प्रदुषण र ट्राफिक जामको गंभीर समस्या बनेको छ । यहाँको क्षमताभन्दा बढि जनसंख्या रहेको कारण यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो । तर शासकहरुको दिमाग गोबरले भरिएको छ वा षड्यन्त्रले । विकास निर्माणको नाममा आउटर रिङ्गरोड, सडक विस्तार, स्याटेलाइट सिटी समस्याको समाधान गर्ने योजना भनिरहेका छन् ।
यसको अर्थ विद्यमान अव्यवस्थालाई समाधान गर्ने होइन कि फेरि विकास निर्माणको नाममा लाखौंलाख मानिसहरुको आप्रवासन बढाउन लागि उपत्यकाको वरिपरि बाँकि रहेको थोरै जमिनमा पनि घर बनाएर उपत्यकालाई कंक्रिटै कंक्रिटले पुरेर पूर्ण रुपमा बिकृत बनाउने उद्देश्य रहेको कुरा स्पष्ट छ । यहाँको जाति, भाषा, कला, संस्कृतिलाई एकछिन नजरअन्दाज गरेर हेर्दा पनि उपत्यका वर्तमान समयमा बसोबास गर्न अयोग्य शहरमा परिणत भइसकेको छ । यस्तो गैर न्यायिक विकास निर्माणको उद्देश्य पुनः नेवाः जातिलाई सबै ठाउँबाट झन् तीव्र रुपमा विस्थापित गर्नु रहेको स्पष्ट छ ।
नेवाः जातिको परम्परागत रोजगारी र व्यवसायमाथि अतिक्रमण र विस्थापन भएको तर अनियन्त्रित आप्रवासनका कारणले नयाँ तथा वैज्ञानिक रोजगारी र व्यवसाय अपनाउन नसकेकाले भएको जमिन बेचेर काम चलाउने भइरहेको छ । अलि बढि जमिन भएकाले जमिन बिक्रि गरी घर बनाउने र घर बहालबाट उनीहरुले आफ्नो गुजारा चलाउँदै आएका छन् । घरको आयुु १०० वर्ष हुन्छ । त्यसपछि घर वहालबाट गुजरा चलाउनेहरुको अर्को पुस्ताको हालत यही अवस्था रहने हो भने के होला ? जसको जमिन छैन, तिनीहरुको हालत अहिले नै सुकुम्बासीको स्थितिमा पुगिसकेको छ ।
७) नेवाः राष्ट्रिय पूँजीपतिहरुको विस्थापनको असर
नेवाः राष्ट्रिय पुँजीपतिहरुलाई राणा शासकहरुले नाङ्गोढंगले भारतबाट माडेहरुलाई नेपालमा ल्याएर विस्थापन गर्ने कामको सुरुआत भयो । उपत्यकामा तीब्र आप्रवासनसहित दलाल पुँजीपतिहरुको विकासले नेवाः राष्ट्रिय पुँजीपतिहरु झण्डै झण्डै पूर्णरुपले विस्थापित भएको छ । यसले पनि नेवाः जातिलाई कमजोर बनाएको छ ।
युगमा आएको परिवर्तनअनुसार नेवाःहरुले संस्कारमा परिवर्तन गर्न सकेको छैन । उहीे पुरानो अवैज्ञानिक संस्कारलाई अपनाउँदै आएका कारणले नेवाः जातिको सामाजिक, आर्थिक र मानसिक अवस्थामा गम्भीर असर परिरहेको अवस्था छ ।
नेवाःहरु एक नभई उत्पीडन, षड्यन्त्र र विभेदविरुद्ध संघर्ष गर्न सक्दैन । शासकहरुको ‘फुटाऊ र शासन गर’ भन्ने नीतिअनुसार पनि र नेवाःहरुको आफ्नै बाध्यता र कमजोरीका कारणले पनि एकढिक्का हुन सकिरहेका छैनन् । यसका मुख्य कारणहरु यी हुन् :
— नेवाः समाज एक प्रकारले विघटित भएर नेवाःहरु छरिएर जानु
— नेवाःहरु विभिन्न जातमा विभाजित गरिएको अवस्था हुनु
— नेवाःहरुलाई छुन हुने र नहुनेमा विभाजित गरिएको अवस्था हुनु
— नेवाः भूमिभित्र र बाहिर नेवाःहरु रहनु
— नेवाःहरु विभिन्न दलमा विभक्त भएर रहनु
नेवाः जातिको समस्या पूर्ण समाधान नेवाः भूमिमा नेवाः स्वायत्त राज्यको स्थापना, उत्पीडनको पहिचानका आधारमा संघीयता, स्वशासन (अग्राधिकार), पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशिता र उत्पीडित जातिहरुका लागि आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक स्वीकृति हो ।
यसको प्राप्ति शासक र राज्यविरुद्ध आन्दोलनले मात्र संभव छ । संघर्षविना यदि कसैले नेवाः जाति वा राष्ट्रको समस्याको समाधान ब्राह्मणवादी राज्य तथा शासकहरुको दयामायाले र संविधान–०७२ लाई संशोधन गरेर संभव छ भन्छन् भने, त्यो नेवाःहरुलाई पुनः धोका दिन आएका धोकेबाज मात्र हुनेछ । हालको संसदमा प्रायःजसो सबै पार्टीहरु र नेताहरु यस्तै धोकेबाजहरु हुन् ।
नेपालमा एउटा यस्तो समूह छ, जसले नेवाः अधिकार, नेवाः मुक्ति र नेवाः राज्यको पनि कुरा गर्दछ । नेवाःहरुले राज्यविरुद्ध संघर्ष गर्नु पर्छ भनेर समय समयमा कुराहरु गर्छ । त्यस्ता समूहका मान्छेहरु संघर्षमा देखिन र अनुहार देखाउन पनि आउँछन् । तर उही धोकेबाज पार्टी र नेताहरुको पछिपछि कुद्ने र खासखास संघर्षको मोडमा उनीहरुकै आज्ञा शिरोपर गर्ने गर्दछन् ।
उनीहरुले नेवाः जातिलाई विश्वासघात गर्दै र धोका दिंदै आएका छन् । यस्ता मानिसहरु वास्तवमा नेवाःको नाममा धोकेबाजका पुच्छर हुन् । धोकेबाजका पुच्छरहरुले जनताका बीचमा भ्रम फैलाउने काम गर्छन् र आन्दोलन असफल पार्ने भूमिका निर्वाह गर्दछन् । त्यसैले यस्ता तत्वदेखि होशियार हुनु पर्दछ ।
अर्कोतिर साच्चै नै नेवाः जातिलाई दिलैदेखि माया गर्ने समूहहरु पनि छन् । उनीहरुले पनि नेवाः अधिकार, नेवाः मुक्ति र नेवाः राज्य आदि नेवाःजातिलाई अपरिहार्य छ भन्ने कुरा गर्दछन् । नेवाः नेता, नेवाः संगठन, नेवाः संघर्षको कुरा पनि गर्दछन् । संघर्षमा इमान्दारीपूर्वक सहभागी पनि हुन्छन्, तर उनीहरुसंग वैज्ञानिक रणनीति र कार्यनीति नभएका कारणले उनीहरु जातिवादी हुने अथवा जातिवादतिर ढल्किने गर्दछन् । उनीहरु एकांगी हुन्छन् र उनीहरुमा चिडचिडाहट र आक्रोश बढी हुन्छ ।
यस्ता समुह वा व्यक्तिले कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुबाट धेरै आशा पनि गर्दछन् । तर कम्युनिष्ट विचार, नीति र नैतिकताबाट च्युत भइसकेका पार्टी र नेताहरुलाई नै कम्युनिष्ट पार्टी र कम्युनिष्ट नेता ठान्न पुग्दछन् । सामन्ती, दलाल तथा ब्राहमणवादी तथा नामधारी कम्युनिष्ट पर्टीका पछि लाग्छन् । सही र गलत नछुट्याई सच्चा कम्युनिष्ट लगायत सबैलाई एकै घानमा हालेर गाली गर्छन् ।
कतिपयले त कम्युनिष्ट भनेकै जातीय मुक्ति आन्दोलनको विरोधीका रुपमा चित्रित गर्दछन् । यसो गर्नु गलत कुरा हो । यस्ता खालका गतिविधिले वास्तवमा हाम्रो आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन भूमिका खेलिरहेको कुरालाई उहाँहरुले राम्रोसँग हेक्का राख्नुपर्छ ।
कमरेड स्तालिनले सोभियत संघको कम्युनिष्ट पार्टी (बोल्सेभिक)को इतिहासमा लेख्नुहुन्छ: लेनिनवादले के घोषणा गर्यो भने यदि सर्वहारा वर्गको पार्टीले उत्पीडित जातिहरुको मुक्ति संघर्षलाई :
(१) प्रत्यक्ष रुपमा समर्थन गरिएन भने ‘जातिहरुको समानता’ बारेमा गरिने सबै घोषणाहरु निरर्थक र मिथ्यापूर्ण हुनेछन् । यसरी अब उत्पीडित जातिहरुको सच्चा समानताका लागि, स्वतन्त्र राज्यको स्थापनाका लागि गरिने उत्पीडित जातिहरुको संघर्षमा उनीहरुलाई समर्थन गर्नु, तथा लगातार रुपमा सहयोग गर्ने सवाल बनेको छ ।
(२) त्यसैले प्रभुत्वशाली जातिका सर्वहारा वर्गले उत्पीडित र पराधीन जनताहरुका जातीय मुक्ति आन्दोलनलाई सशक्त र सक्रिय समर्थन गर्न आवश्यक छ ।
त्यसै गरी कमरेड एङ्गेल्स भन्नु हुन्छ कि जुन जातिले अरु जातिमाथि दमन गर्छ, त्यो जाति आफै स्वतन्त्र हुन सक्दैन ।
यी विचारहरु सर्वहारा वर्गको राजनीतिक पार्टी कम्युनिष्ट पार्टीका जन्मदाता, विचारक, क्रान्तिका नेता तथा गुरुहरुका हुन् । माक्र्स, एङ्गेल्स, लेनिन, स्तालिन र माओ सर्वहारा वर्गका विचार र आन्दोलनका आधिकारिक नेताहरु हुन् । उहाँहरुले भन्नु भएका कुरा र गर्नु भएका कामको उल्टो गतिविधि गरी देश र जनतालाई धोका दिनेहरु, यद्यपि उनीहरुले आफूलाई कम्युनिष्ट नेता भन्छन्, यस्तो भन्दैमा उनीहरु कसरी कम्युनिष्ट हुन सक्छन् र उनीहरुको पार्टी कम्युनिष्ट पार्टी हुन्छ ?
उनीहरुका यस्ता अनैतिक कुराको भण्डाफोर गर्नु पर्ने ठाउँमा सबै कम्युनिष्ट खराब भन्नु वास्तवमा जातीय मुक्ति आन्दोलनलाई कमजोर बनाउनु मात्र हुनेछ । यस कुरामा नेवाः जातिलाई हृदयदेखि माया गर्नेहरुले बुझ्नु पर्दछ ।
अर्को बुझ्नु पर्ने कुरा, नेवाः मुक्ति र नेवाः राज्यका लागि आन्दोलन भनेको सामान्य रुपको जातीय आन्दोलन मात्र होइन, बरु राजनैतिक आन्दोलन हो । नेवाः राज्य भनेको एक प्रकारको सत्ता पनि हो । क्रान्ति सम्पन्न नभई सत्ता प्राप्त गर्ने कुरा सपना मात्र हो । नेवाः जातिलाई सर्वहारा वर्गको जुझारु शक्ति, त्याग, तपस्या र बलिदानसहितको सहयोग नभई नेवाः राज्य प्राप्त गर्न असम्भव छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ ।
जातिवादीहरुबाट र जातीय आन्दोलनबारे स्पष्टता र सही रणनीति कार्यनीति नभएकाहरुबाट केही पाइएला भनेर आशा गर्नु मरुभूमिमा पानीको आशा गर्नु जस्तो हुन्छ । अस्पष्ट भएकाहरुलाई स्पष्ट पार्नु पर्दछ । यी समूहहरु र व्यक्तिहरु नेवाः मुक्ति आन्दोलनका मित्र शक्ति हुन् ।
नेवाः मुक्ति र नेवाः राज्य स्थापनाका लागि जुनसुकै स्वरुपका आन्दोलन गर्न पनि तयार हुने किसिमले तयारी गर्न सक्नु पर्दछ । तर नेवाः जातिको समस्या समाधानका लागि तत्कालै नेवाःहरुले गर्नु पर्ने प्रचारात्मक र आन्दोलनात्मक विषयहरु यसरी राख्न सकिन्छ :
(१) गैर न्यायिक सडक विस्तार, आउटर रिङ्गरोड (हाल स्थगन भएको), स्याटेलाइट सिटीको विरोधमा संघर्ष गर्ने ।
(२) बसाइसराइसहितको अप्रवासनलाई निषेध गर्न, उपत्यका बाहिरबाट आगमन हुने गैर नेवाःहरुलाई उपत्यकामा जमिन किन्न निषेध गर्न र जग्गा दलालहरुलाई जग्गा प्लटिङ्ग गर्ने काम निषेध गर्न संघर्ष गर्ने ।
(३) देशको राजधानी उपत्यका बाहिर लान संघर्ष गर्ने ।
(४) मातृभाषामा शिक्षाको व्यवस्था र कामकाजको भाषा नेपाल भाषा बनाउन स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय निकायलाई दबाब दिन संघर्ष गर्ने ।
(५) नेवाः भूमिमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार नेवाःसहित स्वबासीहरुलाई प्राथमिकता दिन र वेरोजगार नेवाः युवाहरुलाई बेरोजगारी भत्ता दिलाउन संघर्ष गर्ने ।
(६) नेवाः कला संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्न र प्रगतिशील संस्कृति तथा संस्कारको विकासका लागि संघर्ष गर्ने ।
नेवाः जातिको समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन महत्वका विषयहरु लिएर गर्नुपर्ने आन्दोलनका मूल विषयहरु यस प्रकारका छन् :
४) आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सिद्धान्ततः स्वीकार गरी उत्पीडनको पहिचान (जाति, भाषा र क्षेत्र) का अधारमा संघीय नेपाल निर्माण गर्ने, पूर्ण समानुपातिकता र समावेशीको ग्यारेण्टी गर्ने । महिला, दलित र मुिस्लमहरुलाई विशेषाधिकार व्यवस्था गर्ने ।
नेवाः जातिको समस्या समाधानका लागि यी विषयहरु पूरा गर्न हामी नेवाःहरु एकढिक्का भएर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।